နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: Google's Sync
Google 's Sync
Google ကနေပြီးတော့ မနေ့က ဆော့ဖ်ဝဲ အသစ် တစ်မျိုးကို ထပ်မံ ထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ အဓိက ကတော့ စမတ်ဖုန်းများကို ဦးတည်ပါတယ်။ ဖုန်းထဲက Contacts များနဲ့ Google Account ထဲက Contacts များကို Sync လုပ်နိုင်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲပါ။ ဘီတာဗားရှင်းပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဖုန်းကနေ အီးမေးလ်ပေးပို့ခြင်း၊ လက်ခံခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်တတ်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ တစ်ခြားသော ခရီးမကြခဏ သွားဖြစ်တဲ့ သူများ အတွက် ရည်ရွယ် ထုတ်လုပ်ပါတယ်။
အခုထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲကို အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစား များကတော့ iPhone, Android, Windows Mobile Phone နဲ့ အခြားသော S60 Symbian ဖုန်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။ UIQ3 Symbian ဖုန်းများအတွက် ဘီတာဗားရှင်းကို များမကြာမီ ကာလမှာ ဆက်လက် ဖြန့်ချိသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ နေ့လည်တုန်းက မိမိမှာ ရှိတဲ့ ဆိုနီဖုန်းနဲ့ ၀င်ကြည့်တော့ မီနူးသာ ရှိပြီး သုံးလို့ မရသေးပါဘူး။
တစ်ကယ်တော့ ဒီလို ဆော့ဖ်ဝဲမျိုး ပေါ်သင့်တာ ကြာပါပြီ။ ဖုန်းအသစ်တစ်လုံး ပြောင်းမယ်ကြံတိုင်း ခေါင်းခဲရတဲ့ အခက်ခဲဆုံး အပိုင်းကတော့ ဖုန်းထဲက Contacts နဲ့ Calender ကို တစ်ခြားဖုန်းထဲကို ပြောင်းထည့်ရတဲ့ အပိုင်းပါပဲ။ အခုတော့ Google ရဲ့ Sync ဆော့ဖ်ဝဲနဲ့ အလွယ်တကူ ပြောင်းနိုင်ပါပြီ။
စိတ်ဝင်စားသူများ အောက်က လင့်ခ်တွေမှာ သွားရောက် စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။
Find out how to setup Google Sync services for your desktop and mobile devices.
PC Get Gmail and sync your Outlook calendar with Google.
Mac Get Gmail and sync your iCal and Address Book with Google.
Linux Get Gmail and sync your Calendar with Google.
Android Sync Gmail, Calendar and Contacts with your phone.
BlackBerry Get Gmail and sync your Calendar and Address Book with Google.
Symbian S60 Get Gmail and sync your Contacts with Google.
iPhone Sync Calendar and Contacts with your iPhone and get your Gmail.
Windows Mobile Sync Calendar and Contacts and get your Gmail.
Pictures and Links from Google. All Credits to Google.
ရေးသားသူ Ko Boyz at 8:48 PM
Labels: Android, Google, iPhone, Software, Symbian, Sync
MrDBA February 10, 2009 at 9:37 PM
ဂူးဂယ်ကို နေ့တိုင်း စောင့်ကြည့်နေတဲ့ သဘောမှာရှိတယ်။ မှတ်သားသွားပါတယ်
Ko Boyz February 10, 2009 at 9:55 PM
http://news.google.com ကို ဖွင့်ပါ...။
Science/Technology Section ကို ဖွင့်ပါ...။ အဲဒီမှာ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ သတင်းများကို အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ တက်လာတာကို တွေ့ရမှာပါ...။
ksanchaung February 10, 2009 at 10:28 PM
လောကီအရုံ ကာမဂုဏ်တွေပေါ့။ စိတ်လျှော့ကြ။ စိတ်လျှော့ကြ။ သိသာသိ၊ မထိမိစေနဲ့။ ပိုက်ပိုက်ကုန်မယ်။ လူပျိုလူလွတ်ဆိုပြီး မသုံးကြနဲ့။ မဖြုန်းကြနဲ့။ ဈေးကွက်စီးပွါးရေးရဲ့ သားကောင်တွေ မဖြစ်စေနဲ့။ မိန်းမယူဖို့ စုကြဆောင်းကြ။ အနာဂတ်ဟာ ကိုယ့်လက်ထဲမှာ ရှိတယ်။ (ဆုံးမလိုက်ရတာ အာခေါင်တောင် နည်းနည်းချောက်သွားတယ်။)
MrDBA February 10, 2009 at 10:33 PM
khin oo may February 10, 2009 at 11:03 PM
ရေဘဲ သောက်ပါ.ခေတ်က ကောင်းတာမဟုတ်ဘူး..။
khin oo may February 10, 2009 at 11:04 PM
ကွန်တက် ကဘယ်လောက်တောင်များလို့လဲ..။ ကလင်ဒါကကော..ဘယ်နားသုံးဘို့လဲ။
Ko Boyz February 10, 2009 at 11:37 PM
ကိုကေ - လာဗျာ.. ရေမကြိုက်ဘူး.. ဘီယာကြိုက်တယ်။ နှစ်တစ်ကြိုက်လား..လေးတစ်ကြိုက်လား.. ရွေးဗျာ..။
အန်တီဂွိ - တစ်ချို့လူတွေက သွားရင်းလာရင်းနဲ့ ဖုန်းနဲ့ အီးမေးလ် ပို့တတ်တယ်။ သူတို့အတွက် ဒီ အရာတွေက အရေးပါတယ်။
ကြည် February 11, 2009 at 1:04 AM
များများ နဲ့ မဆိုင်သလိုနေလိုက်မယ်။ ပိုက်ပိုက်တော့ အကုန်မခံနိုင်ဘူး။
khin oo may February 12, 2009 at 6:15 AM
khin oo may February 18, 2009 at 12:09 AM
18 Feb 09, 00:04
kom: အရပ်ကလေးရှည်ရင်မဆိုးပါဘူး။ ကဲ ကိုစမ်းချောင်း.. ရော့ စလုံ့းနျစ်ကျပ်.. ဘယ်မှာလဲ boyz. (ုကိုဘ ကို နှစ်ကျပ်ဖြင့် တန်ဖိုးဖြတ်သွားသည်။ )
18 Feb 09, 00:01
kom: KLNG: (မမကွန်နည့်တော့ချိန်းပြီးပြီထင်တယ်)( မဟုတ်ဘူးကာကာ..ကာကာ ထင်တာ မှားနေပြီ. အစိမက ချိန်းပါတယ်။ သူက date မပေးနိုင်သေးဘူး။ )
17 Feb 09, 23:51
kom: 17 Feb 09, 13:20 ခရေဖြူ: သို့ ဘွိုက်.. သတိရစွာဖြင့် စာရေးလိုက်ပါသည်။ ပင်လယ်ထဲနေစဉ်ကာလပတ်လုံး တို့ကိုသတိရနေမည်ဟု ကတိပေးပါ၊
17 Feb 09, 23:03
myo: သူမရှိပဲ နဲ့လာနေတဲ့သူတွေက ပဲ ဥစ္စာစောင့်တွေလိုလို....
17 Feb 09, 23:00
myo: အယ်.. ကိုကေ ကလည်း
17 Feb 09, 22:56
ksg: ဇာတ်လိုက်ကျော်ကြီးမရှိတော့လည်း သုဿာန်တစပြင်ကို ဖြစ်လို့။
17 Feb 09, 13:50
myo: တူ.. နန်းညီ .....တို့ကဒီအိမ်ကို တစ်နေ့ (၈) ခါ လာကြည့်တဲ့အတွက် ခေါက်ဆွဲကြော်ပိုကျွေးပါ...
17 Feb 09, 13:43
ksg: မကြာမီလည်မည်။ ညှော်။
ksg: သန္တာ။ ညီမလေး မှန်ပါတယ်ကွယ်။ ဦးဘွိုင်းပုံ ကြည့်ချင်သူများအားလုံးကို သားသားကိုကေမှလည်း စီးပွါးဖြစ်ပြသရန် အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။
17 Feb 09, 13:35
17 Feb 09, 12:48
sin dan lar: တူ.. နန်းညီ .....အာပူလျှာပူ၊ ဗူးသီးကြော်၊
sin dan lar: ပုံဖော်ကြည့်နေသည် သန္တာ.....။
17 Feb 09, 12:31
နန်းညီ: အော်.. ပီဘွိုက်ဇ်မရှိဘူးကိုး.. ဘာလဲ ဒီတစ်ခါလည်း အိမ်စောင့်သူတွေ စားသောက်ရေး တာဝန်ယူရဦးမှာလား..
17 Feb 09, 12:07
17 Feb 09, 11:55
သန္တာ: စကားပြောရင် ထစ်တယ် အသားကဖြူပါတယ် မျက်စိရှိဘူး (ကျဉ်းကျဉ်းလေး) အလွန်တရာ ပိန်ပါတယ် ခြေတန်လက်တန်များလည်း ရှည်ပါတယ် ထိုနေ့တွင်ဂျေးမရှိပါ ဆံပင်များအနည်းငယ်ကောက်ပါသည်။
17 Feb 09, 11:52
သန္တာ: ဟုတ်ဘူး သန္တာက မရဘူး လာမှာပဲဆိုလို့ အားနာလို့ထင်ပါတယ် ။ သူကမဆိုးပါဘူး ရုပ်ရည်လေးကတော့ ( လူမြင်ရင်ပြေးချင်စရာ)
17 Feb 09, 10:33
myo: ဂွတ်သောမောနင်းပါ။ သန္တာ: သူ့ပုံ ကို describe လုပ်ပေးပါ။ (တို့လည်းတောင်းဆိုပါတယ်..ဝေါင်ဝေါင်ရှေး ရအောင်).. အားလုံးကို ကော်ပီလုပ်ပါသည်။
KLNG: ဦးဘွိုင်းဦးဘွိုင်းသန်တာ့ကိုတော့ချိန်းပြီးနာနည့်မမစင်ဒါလားနည့်ကျတော့မချိန်းဘူး(မမကွန်နည့်တော့ချိန်းပြီးပြီထင်တယ်)စိတ်နာပါတယ်လေ :zonked:
KLNG: မောနင်းဦးဘွိုင်းပင်လယ်ထဲတွင်ရေငံများကိုများများသောက်ပါလေ။မုတ်ဆိတ်မွှေးများကိုလဲ ဂရုစိုက်ပါလေ။ :nervous:
17 Feb 09, 09:13
sin dan lar: ဂွတ်သောမောနင်းပါ အိမ်ရှင်များနှင့် ပင်လယ်ထဲမှ ကိုဧည့်သည်
16 Feb 09, 23:55
kom: myo: ကျေးဇူး..အစ်မက နဲနဲ ရိုးတယ်။ ကြည်..သာဓု သာဓု သာဓု.။ သန္တာ: သူ့ပုံ ကို describe လုပ်ပေးပါ။ ကံထူးသူလေး....
16 Feb 09, 23:34
ကြည်: သောက်တော်ရေ လဲပေးပြီး။ ဘုရားကို သုံးကြိမ်ဦးချကာ ..မည်သူမှ မမြင်ခင် ခပ်သုတ်သုတ်လေးပြန်သွားပါဒယ်။
myo: မမ kom ၁၃ကျပ်ဆိုတာ သို့ ကိုပြောတာလေ..
16 Feb 09, 22:44
သန္တာ: ဟုတ်ကဲ့ သူချိန်းလို့သွားခဲ့တာပါ
16 Feb 09, 22:41
kom: sin dan lar:သို့(၁၃ ကျပ်). ဆိုတာ ဘာလဲ။ သန္တာ: ကိုဘ နဲ့တကယ် penisular မှာတွေ့ခဲ့တာလား။
16 Feb 09, 22:29
myo: ခုမှ ပြင်ကပြန်လာတာ
myo: အာ မသွားကြနဲ့ဦးလေ
16 Feb 09, 22:27
သန္တာ: ချစ်မျိုးလေး မမအိပ်တော့မယ်နော် ပြီးရင် မကြီးလာလိမ့်မယ် မကြောက်နဲ့နော်
16 Feb 09, 22:24
sin dan lar: ကင်းချိန်းပါပြီ..။ မျိုးနှင့် သန္တာ ဆက်စောင့်ပါ.. လိမ်မာရစ်ကြပါ.. ပြန် 8 တော့မယ်..။ ဘိုင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
16 Feb 09, 22:22
သန္တာ: ဦးဘွိုင်းကို ခေါ်ပေးကြပါ စကားမပြောရတာ ၂၄နာရီပြည့်တော့မယ် .....၀ါးဝါးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
16 Feb 09, 21:21
myo: တို့က ထန်းညှက်ခဲ ပဲပါလာတယ်
16 Feb 09, 21:20
sin dan lar: လာထားးးးးးး
16 Feb 09, 21:19
sin dan lar: ဟီးဟီး... အဲဒါ ကင်းသမားနဲ့ စကားလာပြောမယ့်လူ ယူလာမယ်ဆိုလို့
16 Feb 09, 21:15
myo:ေ၇နွေးကြမ်းနဲ့ လဖက်ရောပါလား စင်စင်
16 Feb 09, 21:14
sin dan lar: ညဦးပိုင်းကင်း ရောက်ပါပြီ...။ စောင်၊ ခြင်ထောင် ပါပါသည်။ :P
16 Feb 09, 21:13
myo: ညမှ ကင်းသမားနဲ့ လာစကားပြောမယ်..
16 Feb 09, 20:43
16 Feb 09, 17:33
sin dan lar: ညနေတစ်ခေါက်လာကြည့်သည်။ ညမှ ကင်းလာစောင့်မည်။
16 Feb 09, 14:57
danTanDan: အိုဘယ်. ကိုဘွိုင်ဇ ရေရရရရရရ.................
16 Feb 09, 14:42
သန္တာ: လွမ်းလိုက်တာ ဦးဘွိုင်းရယ်.........(တကယ်ပါပဲ)
16 Feb 09, 13:29
sin dan lar: သို့(၁၃ ကျပ်)..။ ဝေးတစ်မြေမှ ကိုဘ..၊ အဲ..ဝေးတစ်ရေမှ ကိုဘ..
16 Feb 09, 12:13
16 Feb 09, 12:01
myo: ကိုဘွိုက်မရှိတဲ့ ဟက်တ်စတေရှင် ကြီးဟာ ဟာတာတာကြီးပါလား... (အမှိုက်ဖွသွားခြင်း)
16 Feb 09, 11:05
16 Feb 09, 06:00
kom: အားလဲုး မင်္ဂလာဘာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာ။
16 Feb 09, 01:57
kom: ကိုစမ်းချောင်းယူသွားတဲ့ မက်ဆေခ်ျ က ( ksg: အမူးသမားတွေလို့ ပြောချင်တာလား။ ဟုတ်ပ။ ဟုတ်ပ။ သိပ်မသောက်နိုင်တော့ဘူး။ အသက်ကြီးပြီ။
kom: အဲဒါက စပြီးထုံ တာကိုပြတာဘဲ. တို့ပြောလိုတာက kom: မနက်ဖြန်ဆိုတာ ယနေ့ကိုဆိုလိုသည်။
16 Feb 09, 01:01
ksg: အမူးသမားတွေလို့ ပြောချင်တာလား။ ဟုတ်ပ။ ဟုတ်ပ။ သိပ်မသောက်နိုင်တော့ဘူး။ အသက်ကြီးပြီ။
16 Feb 09, 00:46
myo: အိပ်တော့မယ်..အားလုံးပဲ ဂွတ်သောနိုက်ပါ
16 Feb 09, 00:45
myo: မမkom မအိပ်သေးဘူးလား..
kom: မနက်ဖြန်ဆိုတာ ယနေ့ကိုဆိုလိုသည်။ ko boyz သူငယ်ချင်းဆိုလျင် သူ့လိုဘဲထင်သည်။
16 Feb 09, 00:39
kom: မနက်ဖြန် အသစ်မရေးပါ။ အိမ်စာလုပ်ရင်းလာကြည့်သည်။
16 Feb 09, 00:37
ksg: ခုမှ သွားကာစရှိသေးတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ဖုံတက်ဦးမှာလဲ။ လာပြီး မီးကင်းစောင့်ပေးတာ။
16 Feb 09, 00:35
myo: ကိုစမ်းချောင်း ဖုန်လာသုတ်တာလား
16 Feb 09, 00:32
ksg: Blog Addict ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေတဲ့ မမ KOM ကို ဆုံးမနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
16 Feb 09, 00:25
myo: မမkom လား.. ကိုစမ်းချောင်းလား
16 Feb 09, 00:15
ksg: သံယောဇဉ်ဖြတ်ပြီး စာကောင်းကောင်းလုပ်ပါ။ မိုးရွာတုန်း ရေခံပါ။ ကြိုးစားမှ ဒိုးပြားရမယ်။
16 Feb 09, 00:14
ksg: မပူပါနဲ့။ သူ့မှာ မူးရင် ရှုစရာဆိုလို့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့တွေပဲ အလျှံအပယ် ရှိပါတယ်။
15 Feb 09, 23:59
kom: 15 Feb 09, 22:37 TZA: သို့ ဘွိုက်.. သတိရစွာဖြင့် စာရေးလိုက်ပါသည်။ ပင်လယ်ထဲနေစဉ်ကာလပတ်လုံး တို့ကိုသတိရနေမည်ဟု ကတိပေးပါ၊ ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်များကို ယောင်၍ပင် မတောင့်တမိပါနှင့်။
15 Feb 09, 23:41
ksg: ကောင်းပေစွ။ ကောင်းပေစွ။ စာကျက်။ အိမ်စာလုပ်။ တော်ကြာအနှောင့်အယှက်ပေးသလို ဖြစ်နေလိမ့်။
15 Feb 09, 23:12
kom: ဟုတ်တယ် ဒီနေ့ဒီစီပုံး ကြောင်နေတယ။် ပျောက်ပျောက်သွားတယ။် hang နေတဲ့သဘော.. ပြီးတော့မှ ပြန်မြင်ရတယ်။
15 Feb 09, 23:11
kom: ဘယ်မှာ တင်ကြလို့တုံး (ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားသည်။ မတွေ့မီပါလား) ဘလော့စတုံးက တင်ဘူးတယ်။ လူခေါ်တဲ့သဘောပေါ့။
15 Feb 09, 22:56
ksg: တရားသမားတွေသုံးတဲ့ ပုတီးဗျ။ ဒါ့ထက် ဘလော်ဂါအတော်များများ သူတို့ပုံတွေကို ခန့်ခန့်ညားညားတင်ကုန်ကြပြီ။ အမ်းမရော ဘယ်တော့တင်မလဲ။
15 Feb 09, 22:50
kom: ဆွဲကြိုးဖန်စီ ပေါ့ လှကလှန့ အခု မဆွဲရဲဖြစ်နေတယ်။ ကိုစမ်းချောင်း ပြောတဲ့ဘွားတော် ကြီးဖြစ်သွားမှာစိုးလို့
15 Feb 09, 22:48
ksg: ဟား ဟား ဟား။ ဘာပုတီးလဲ။
15 Feb 09, 22:44
kom: ဟိုနေ့က ပုတီးဆွဲမလို့ ကိုစမ်းချောင်းပြောတာ သတိရတာနဲ့ပြန်ချွတ်ထားခဲ့ရတယ်။ :zonked: :zonked: :zonked:
15 Feb 09, 22:42
kom: ksanchaung said... COMPLETE IDIOT GUIDE TO TYPICAL MESSAGE မည်းမှောင်သော မှန်တံခါးကို ခပ်ဖွဖွခေါက်ပါ။ ယောဂီဝတ်စုံနှင့် လွန်စွာကြီးမားသော ပုတီးကြီးတစ်ကုံး လည်ပင်း၌ ဆွဲထားသော ဘွားတော်ကြီးတစ်ဦးမှ တံခါးဖ
ksg: သြော်။ ဆံဖြူမယ်တော် ရှိသေးတာပဲ။ မေရှောက်ဖုံ - အဲလေ မှားလို့။ အမ်းမရေ။ အမ်းမ။
15 Feb 09, 22:35
ksg: အိမ်း။ ယစ်ထုတ်ကြီးလည်း ပင်လယ်ပြင်မှာ သိုင်းကျမ်းအရှာ ထွက်နေပြီ။ သူဖုန်းစားကြီး ငါပဲ ကျန်ခဲ့တယ်။
15 Feb 09, 22:34
ksg: နဂါးနိုင်ဓါး ဦးထိပ်ထား၊ ရှိခိုးကော်ရော် မမေ့သော်။ တိမ်လွှာဓါးရှင် မပေါ်ခင်၊ ယှဉ်ပြိုင်အံတု ရန်မမှု။
15 Feb 09, 21:14
15 Feb 09, 21:06
myo: Boyz: ကိုယ့်စီပုံး ပြန၀င်လို့ မရ...။ ဒီစီပုံးတစ်ခုပဲ ၀င်လို့ရနေတယ်..။ ဘာဖြစ်တာပါလိမ့်
15 Feb 09, 20:54
Boyz: တူတူရေ.. ၀ါး... နက်ရတုန်း ခဏ တက်လာတာ။ အော် ဘ၀ ဘ၀.. ဘလော့ဂ်ကို မဖြတ်နိုင်ပါလားနော်...။ မနက်ကို ၇း၀၀နာရီ Fast Crew Boat စီးပြီး ပင်လယ်ထဲ သွားပါပြီ...။
15 Feb 09, 19:07
kom: ko boyz ခရီးသွားတယ် ဆိုလို့ ဝိုင်းပြီး လွမ်း နေကြတာပါ မခင်မင်းဇော်: (မျာကနျာငယ်လေး နဲ့ဖြေသည်။)
15 Feb 09, 18:34
ခင်မင်းဇော်: ဘာတွေ ဖြစ်နေကြတာလဲ ဟင်... မျက်နှာသေ လေးနဲ့ ၀င်မေးသွားသည်။
15 Feb 09, 13:09
sin dan lar: နာလည်းခေတ်မီအောင် ဝင်လွမ်းဦးမှ
15 Feb 09, 12:51
ကြည်: ဘွိုက်တစ်ယောက်မရှိတော့ အားလုံးမျက်ရည်တောက်တောက်ကျနေရလေချေပြီ။များလည်းပါတယ်( ဟီး ရွတ်)
15 Feb 09, 12:50
သန္တာ: မနေ့ကတောင် cityhall မှာတွေ့ခဲ့သေးတယ် ဒီလိုမှန်းသိရင် ပြန်မလွှတ်ပဲ ဆွဲထားလိုက်ပါတယ် အခုတော့ ဟင့်ဟင့်.......
15 Feb 09, 12:49
သန္တာ: ရဘူး အခုခေါ်ပေးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ကြည်: kom အသံလေးက တစ်ကယ်ကြေကွဲပုံပါ။ ကြည်ရှိတယ်။ အားမငယ်နဲ့ တိတ်တိတ်။
15 Feb 09, 12:47
kom: တိတ်တိတ် သန္တာ: သူပြန်လာမှာပါ (မျက်ရည်သုတ်ရင်းပြော)
15 Feb 09, 12:46
15 Feb 09, 12:45
kom: သူ သိတ်ရက်စက်တယ် (ကြေကြေကွဲကွဲ ပြော)
ksanchaung: ဦးဘွိုင်းရေ။ ဦးဘွိုင်း။ ဟ။ တကယ်သ
15 Feb 09, 12:44
danTanDan: ဟယ်.. သွားလေရာဘေးကင်း / သူဌေးမင်း ဖြစ်စေသတည်း
15 Feb 09, 12:43
danTanDan: boyz တယောက်သွားရှာဘီ .. နှူယ်တောင်မဆက်လိုက်ရဘာလားနော် (မျက်လုံးလေးအဝေးကိုငေ:၍လွမ်းလွမ်းစွေးစွေးပြော)
15 Feb 09, 12:38
ကြည်: ကြည်ကနေကောင်းပါတယ်။ သန္တာကိုစိတ်ပူတာ။
15 Feb 09, 12:32
သန္တာ: ကြည်ရော နေကောင်းလား
သန္တာ: ဟုတ် နေကောင်းပါတယ် ကြည်ရယ်
15 Feb 09, 12:29
ကြည်: သန္တာ နေကောင်းရဲ့လား
ကြည်: သတိရလိုက်တာ။ ဒီအပါတ် အလင်တန်းဂျာနယ် မှာ ဆရာကြိးသာဂဒိုး နဲ့ အင်တာဗျူးကိုဖတ်ပြီးတော့။
15 Feb 09, 12:28
15 Feb 09, 12:27
ကြည်: ဘုရားပန်း ဘာလာလဲသွားပါတယ်။ ၀ီရိယကြီးပုံများ ပြောပါတယ်။အိမ်ရှင်တောင်ခရီးမထွက်သေးဘူး
15 Feb 09, 12:25
သန္တာ: ဟုတ်လား မတွေ့လိုက်ရလို့ စိတ်မကောင်းဘူး
15 Feb 09, 12:16
MrDBA: လေဆိပ်ဆင်းတုန်းရှိပါသေးတယ် လိုက်သွားလို့မှီသေးတယ် ..............
15 Feb 09, 12:14
သန္တာ: မနေ့ကပြောတော့ မသွားသေးပါဘူးတဲ့ ဒီနေ့ကြတော့မရှိတော့ဘူး သြော် ......ဖြစ်တတ်ပါတယ်လေ
15 Feb 09, 12:12
MrDBA: သူလား .... စိတ်ထဲမှာတော့ ရှိပါတယ်ကွယ်
15 Feb 09, 12:11
သန္တာ: သွားပြီလား သာမီးကိုတောင်နှုတ်ဆက်မသွားဘူး
15 Feb 09, 12:10
MrDBA: ဦးဘွိုင်းက ရေထဲသွားမှာကွဲ့ ရေသွား ပေးမနေနဲ့တော့